Olee Otú Ị Pụrụ Watch YouTube on Roku
Dijitalụ video ọkpụkpọ Roku bụ obere igbe na-eweta ọnụ videos, audios na ndị ọzọ na web ọdịnaya. The ọkpụkpọ Roku debuted na 2008, ma ọ bụ a ngwaọrụ raara nye Internet TV na-enye ohere ọrụ na-ekiri Internet na agbasa ozi n'ikuku mmemme na ha TV. Iji mee ka Roku-arụ ọrụ, niile ị chọrọ bụ laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa a elu-ọsọ internet na a free Roku akaụntụ na ị na-niile setịpụrụ na-enwe web ọdịnaya na nkwanye vidiyo na ina.
The Roku dijitalụ video ọkpụkpọ na-enye ọtụtụ ihe n'usoro nke web ọwa na-ekiri fim, videos na-ege ntị music, redio. The nhọrọ na-agụnye Netflix, Hulu Plus, Amazon, Crackle, TuneIn redio, Spotify na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. YouTube nwekwara rutere na Roku-adịbeghị anya, nke na-enye ohere ka ndị mmadụ na-enuga ọtụtụ puku videos kpam kpam. Ugbu a, ka anyị hụ otú na-ekiri YouTube on Roku mfe.
Part 1: Olee ekiri YouTube on Roku
Part 2: Olee otú ego ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị bụ a Roku njikere gbaara ngwaọrụ
YouTube videos ndị siri ike na-ekiri na Roku ruo mgbe biakwa obibia nke Roku 3. Roku 3 nwe nwere ike ugbu a na-enweta YouTube ngwa na ha gụgharia setịpụrụ top igbe. Ya mere, ka ịmụta otú wụnye YouTube ọwa nri na Roku ha ọwa ụlọ ahịa nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Jikọọ Roku gị TV ma tinye gị WiFi netwọk. Mgbe ahụ nbanye na gị Roku akaụntụ mbụ.
Nzọụkwụ 2: Tinye YouTube ọwa. Jiri search ọrụ na ụdị YouTube ọwa. Ọ bụ free na nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nti Fim. Dị nnọọ nweta na pịa Tinye ọwa na dị nnọọ nkeji ole na ole YouTube ọwa ga-atụkwasịkwara gị Roku account.Now, pịa bọtịnụ "Gaa ọwa" ma ọ bụ "My ọwa" on Homepage, na ị ga-ahụ nnọọ kwukwara " YouTube ọwa "tinyere ndị ọzọ ọwa ị ga-kwukwara na n'oge gara aga.
Stpe 3: Mee ọ rụọ ọrụ gị YouTube akaụntụ. Nweta ihe ịrịba ama na YouTube akaụntụ njikọ site Roku na ọ ga-gbapụta ihe 8-ọbula koodu rụọ ọrụ gị YouTube na akaụntụ. Dị nnọọ banye na akaụntụ gị iji laptọọpụ ma ọ bụ Smartphone na tinye koodu ejikọta gị Roku na gị YouTube na akaụntụ.
Stpe 4: ngwaọrụ Mmakọ. Ị nwere ike ijikọ na ekwentị gị, mbadamba nkume ma laptọọpụ na gị Roku akaụntụ. Mgbe rụọ ọrụ gị YouTube akaụntụ, Roku ga-enye gị ọzọ koodu ejikọ gị dijitalụ ngwaọrụ na ya. Access www.youtube.com/pair njikọ si gị họọrọ na ngwaọrụ ma tinye koodu nyere site Roku. Alternatively, ị nwere ike iṅomi koodu na iji QR koodu agụ na ekwentị gị.
Nzọụkwụ 5: Enwe. Ugbu a, i nwere ike ịnụ ụtọ na-ekiri YouTube on Roku.
Ị pụrụ nanị gaa njikọ iji lelee ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị ma ọ TV nlereanya a na depụtara na ya na-eme n'aka na ọ bụ a Roku-njikere na ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta ọhụrụ TV, hụ na ọ nwere ihe MHI (Mobile High-Definition Link) ọsọ ọsọ oghere ka itinye a flash-mbanye achọ mkpisi akpọ Roku gụgharia Stick. Ọ bụ obere-acha odo odo acha gụgharia mgbasa ozi ọkpụkpọ na-enyere gị iji ngwaọrụ gị ime na-eme Ịchịkwa.
> Resource> YouTube> otú na-ekiri YouTube on Roku